We She Me: ငါးခေါင်းဟင်းချို
khin oo may - 4/5/09, 7:14 PM
တို့ ၁ ယူပါရစေ။
khin oo may - 4/5/09, 7:15 PM
MrDBA - 4/5/09, 7:41 PM
ကျွန်တော်တော့ ငါးသရက်သီးငပိဟင်း ဒီနေ့ချက်စားတယ်ဗျ။
Anonymous - 4/5/09, 8:20 PM
အိမ်က အဖေလည်ုးကိုက်မှကြိုက်။ ကုလားဈေးနားကဆိုင်မှာ ငါးခူခေါင်းအကြီးကြီးတွေ ၀ယ်ရရင် ချက်ကြွေးရဦးမယ် ဒီနည်းအတိုင်းဘဲစမ်းချက်ရဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါဘဲရှင့်း)
sin dan lar - 4/5/09, 8:34 PM
ကိုဒီဘီ.. ဘိုင်ဒဝေးနဲ့ မကြွားပါနဲ့
Anonymous - 4/5/09, 9:30 PM
ကြိုက်ပါတယ်ဗျို့ ချက်စရာ အမယ် တစ်ခုတိုးပြီး
မနက်ဖြန် မျှစ်နဲ့ သံပရာသီ ၀ယ် ၊ စပလင်း ဓါပြားရိုက်လို့ စမ်းလိုက်အုံးမယ် ခင်ညာ
စန္ဒကူးမေ - 4/5/09, 10:46 PM
salmon တော့ဝယ်လို့ရဘူး.. အကိုရေ တူနာခေါင်းနဲ့ရောချက်လို့ရမလား..တူနာအလတ် စား (၃)ကီလိုလောက်အကောင်လေးတွေ..
Phyo Maw - 4/5/09, 11:10 PM
ငါးသေတ္တာဗူးထဲက ငါးနဲ့ကော ချက်လို့ရလားဟင်
တစ်ကိုယ်တည်းသမားအတွက် ဟင်းတစ်ခွက်ကတော့ အိမ်မက်ပါပဲဗျာ
ကို we she me တို့ချက်ပြီးတင်တဲ့ ပုံတွေလည်း နောက်ဆို ထမင်းစားရင် ကြည့်ပြီးစားရမယ်။ :D
Taungoo - 4/5/09, 11:34 PM
ဒါတော့ ကြိုက်တယ်ဗျို့။ ငရုတ်သီးခြမ်းကွဲလေးပါ ထည့်ရင် အရသာပိုတက်မယ်ထင်တယ်။
----- Jennifer ----- - 4/5/09, 11:40 PM
subuueain - 4/6/09, 12:29 AM
imaginary clouds no2- 4/6/09, 12:52 AM
imaginary clouds no2- 4/6/09, 12:55 AM
အန်ဒီရေ ချက်စားကြည့်ဦးမယ် ။ အလုပ်များနေလို့ မှတ်ချက်တွေမရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။
မြူးသျှရီ - 4/6/09, 3:18 AM
Link ချင်လို့ ပါ ရမလား?
မင်းညို - 4/6/09, 5:35 AM
အင်းစိန်ဖော့ကန်ဈေးမှာ ငါးခေါင်းတွေဝယ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ခု ချက်စားတာအမှတ်တရရှိတော့တယ်။ အကြီး ၅ ခုမှ ၂၀၀၃ လောက်က ၂၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်။ တန်သပေါ့ဗျာ။
Moe Cho Thinn - 4/6/09, 6:10 AM
မမ kom ပြောသလို ပညာလာယူသွားပါပြီ။ အော်.. မကြိုက်တာရယ်လို့လဲ မရှိတော့တဲ့ ငါ့ဘ၀ပါလား။
မိုးကောင်းသူ - 4/6/09, 10:43 AM
ငါးခေါင်းချဉ်ဟင်းချက်နည်းယူသွားပါတယ်။ ပဲငါးပိ အစပ် လေးထည့်လိုက်တော့ ပိုလို့စားကောင်းတယ်နော်။ အရမ်းကြိုက်တဲ့ဟင်းတခွက်ပါ။ နောက်နေ့များမှာမှ ချက်စားပါအုံးမည်။
Yan - 4/6/09, 12:22 PM
Anonymous - 4/6/09, 5:34 PM
Red emperor or Snapper fish heads are good too...
T T Sweet - 4/7/09, 2:02 AM
ငါးခေါင်းဟင်း လာစားသွားပါသည်။ စလုံးမှာတော့ ဆိုင်ှမှာ ခဏခဏစားဘူးပါသည်။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ဗိုက်ဆာလာပြီ။
Phyo Evergreen - 4/7/09, 10:05 PM
ငါးခေါင်းဟင်းလေးနဲ့ဆို ထမင်းစားမြိန်မှာသေချာတယ်..။ တစ်ရက်တစ်ရက် စားဖို့ ဦးနှောက်ခြောက်နေရတယ်..စားလို့မကောင်းလို့..။ ငါးတွေတော်တော်ဈေးသက်သာတာပဲ.. အမေလည်းအဲသလို ဥနီကို ပန်းပွင့်ပုံဖော်ပြီးချက်တယ်။
Andy Myint - 4/8/09, 9:05 PM
မစန္ဒကူးမေ....စင်္ကာပူမှာတုန်းက ချက်စားဖူးတယ်။ တူနာခေါင်းကတော့ အနံ့နည်းနည်း ပြင်းတယ်။ စားပြီးလို့ လေချင်တက်ရင် ငါးကြီးဆီ (ဆေး) သောက်ထားသလိုမျိုးပဲ
အိမ့်ချမ်းမြေ့ - 4/10/09, 9:35 AM
ကနေဒါကို ဆယ်လ်မွန်တွေ ပြန်လာတာ နည်းသွားတာ ဒါကြောင့်ကိုး :P
Rita - 4/10/09, 7:37 PM
ငုံးဥလေးတွေက ပေါ်လို့ စားချင်လိုက်တာနော်
နုသွဲ့ - 4/11/09, 1:59 AM
အစားတွေပဲ စဉ်းစား (ချက်လည်းစားပါတယ်) မိနေလို့ တင်းခံထားတာ မနေနိုင်တော့လို့ လာဖတ်သွားပြီး) အသေးစိတ် သင်ပေးထားတော့ စမ်းချက်ရတော့မှာပေါ့လေ...ဒုက္ခ ဒုက္ခ။ ပိန်ဦးတော့မှာပဲ။
ဒါနဲ့ Bamboo House က မြေနီကုန်းထဲမှာ မဟုတ်လား။ ငယ်ငယ်က ရောက်ဖူးတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ကောင်း ရှားပါးတဲ့ ခေတ်မှာ ဒီဆိုင်က စတိုင်ကျကျ တည်ခင်းဧည့်ခံပြီး အစားအသောက်တွေကလည်း သိပ်ကောင်းတာပဲ။
ThuHninSee - 8/10/09, 7:48 AM
ဒီနေ့ ချက်စားဖြစ်တယ် ကိုအန်ဒီရေ.. ဆရာ့လက်ရာတော့ မမီဘူးပေါ့။
စပါးလင်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဝယ်မရလို့. ဆိုင်က ကြိတ်ပြီးသားပဲ
meemee - 10/6/09, 10:18 PM
ကိုဇော်ကြီး - 1/31/10, 6:42 AM
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဟင်းချက်နည်းပါပဲဗျာ။ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ ဟင်းချက်နည်း မှတ်သွားပါတယ်။ နောက်လည်း လာပြီး နည်းယူပရစေ။
Anonymous - 6/3/10, 3:59 AM
အခု ချက်နည်းတွေ့တော့ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ.